Ikati yokundwendwela kweliso lekati ivela eBrazil - incoko ye-chatoyancy - ividiyo
Iliso lekati elibonisayo
I-Tourmaline yi-crystalline boron silicate yamaminerali. Idityaniswe nezinto ezinje ngealuminium, isinyithi, imagniziyam, isodiyam, ilithium, okanye ipotassium.
Thenga i-tourmaline yendalo kwivenkile yethu
Ilitye elixabisekileyo. Ngokunjalo nezinye iintsapho zamatye anqabileyo, i-tourmaline nayo iza nemibala eyahlukeneyo.
I-Tourmaline iphinde ibe neyithandathu yelungu le-cyclosilicate ene-crystal system. Iyenzeka njengexesha elide, elincinci kumakristam e-prismatic kunye nee-columnar eziqhelekileyo eziqhelekileyo zincantathu kwinqanaba eliphambeneyo, ngokuqhelekileyo zijongene nemilenze eboshiweyo. Ukongezelela, isitayela sokuphelisa ekupheleni kwama-crystals ngamanye amaxesha asymmetrical, esibizwa ngokuba yi-hemimorphism.
Ngapha koko, iikristali ezincinci ze-prismatic ziqhelekile kwigreyite yegreyite. Ibizwa ngokuba yi-aplite, kwaye ihlala yenza iipateni ezinje nge-radial daisy. I-Tourmaline inamacala amathathu e-prism, akukho enye iminerali eqhelekileyo enamacala amathathu. Iifrimu ebusweni zihlala zinemithambo enzima ethe nkqo evelisa isiphumo esijikeleziweyo esingunxantathu.
Okokugqibela, i-tourmaline kunqabile ukuba i-euhedral ngokugqibeleleyo. Okungafaniyo yayiziidrafti ezintle zeYinnietharra, kwintshona yeOstreliya. Zonke iikristali ze-hemimorphic zii-piezoelectric, kwaye zihlala zi-pyroelectric ngokunjalo.
Impembelelo yamehlo ekati
Kwi-gemology, ukuxoxa, ukuncokola okanye isiphumo samehlo sekati, sisiphumo sokubonakalisa okubonakalayo kumatye athile. Yenziwe ngesiFrentshi "oeil de chat", ethetha "iliso lekati", ukuncokola kuvela kwisakhiwo semicu yento, njengakwiliso lekati le-tourmaline, okanye kwizinto ezifakwe kwimicu okanye kwimingxunya ngaphakathi kwelitye, njengakwiliso lekati i-chrysoberyl. Imimandla ebangela ukuxoxa kwi-chrysoberyl ziiminerali ze-rutile, ebunjwe ikakhulu yitanium dioxide. Iisampulu ezivavanyiweyo azivelisanga bungqina bemibhobho okanye imicu. Iinaliti zithintela konke ukungqinelana ngokuthe ngqo ngokubhekisele kwimpembelelo yamehlo ekati. Ipharamitha yeeletisi yeenaliti ihambelana kuphela nenye yee-orthorhombic crystal axes ze-chrysoberyl, ngenxa yolungelelwaniso ecaleni kwelo cala.
Le meko ifana nobukrelekrele besilika yesilika. Ukukhanya okuqaqambileyo kokukhanya okubonakalayo kuhlala kuhambelana nokuya kwicala leentsinga. Ukuze ilitye elinqabileyo libonise oku kusebenza kakuhle kufuneka lisikwe en cabochon, erhangqwe ngesiseko seflethi endaweni yokujikwa, ngemicu okanye izakhiwo ezinemicu ehambelana nesiseko segem egqityiweyo. Iimpawu ezigqityiweyo zibonisa ibhendi yokukhanya echazwe ngokuthe ngqo ehamba ngaphaya kwelitye xa lijikelezayo. Amatye ancokolayo akumgangatho omncinci abonisa isiphumo sebhendi njengoko kuqhelekile kukwahluka kwekati ye-quartz. Amatye ajongeneyo awabonisi umphumo kakuhle.
Iliso lekati elivela eTrazil
Thenga ukhenketho lwendalo kwivenkile yethu yegugu